Cishe ngamunye wethu angakwazi ukukhumbula nge ayenqaba enkulu amahora ubuhlungu ayichitha umzamo iyize ukulala. Ukuvula ngapha nangapha, futhi ecabanga engqondweni yakhe konke ayeyazi ukuthi ukufunda indlela ukuzumeka masinyane. Isifundo, nokwelashwa ngamandla kwalesi sifo bekwi eyala yezokwelapha ezifana Neurology kanye wezifo zengqondo.
Eziyizimbangela lobusuku yethu becabangela kungaba ezahlukahlukene. Isinyathelo sokuqala siwukuba ukuzama ukuqonda imbangela yangempela yalo mkhuba, ukuthola izindlela eziphumelelayo ukuze silwe ukuqwasha. Kaningi, ende ukuphazamiseka kokulala kubangelwa yizifo ezihlobene nokungabikho ukungasebenzi kwekhono esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, umfutho ophakeme wegazi, isifo sikashukela kanye nabanye abaningi.
Kulokhu, lo usizo olufanelekile yezokwelapha kuyoba isixazululo abathembekile kakhulu futhi ephumelelayo nempikiswano izinkinga zokulala. Kodwa ngokuvamile akunjalo kwethusa!
"Abantu abawuhlupho" Ngokomzwelo
ubuthongo Abanempilo, unika umuntu ithuba elihle kakhulu uphumule ngemva kosuku kanzima ukuze alungiselele olandelayo, alizange. Inhloko osebenzisa umbuzo owodwa kuphela: "Indlela ukufunda ukuzumeka masinyane?"
Futhi ekuseni - kuyanda ekuseni futhi ukungabakhathaleli nhlobo amandla ukuphila okuvamile, ingasaphathwa ngokuphumelelayo novivinyo futhi ukucindezeleka. Nakuba base zivame ukuba imbangela eyinhloko izinkinga zethu.
Ngakho, uma isidingo kokungenela yezokwelapha, ukwelashwa ngaleso sikhathi ekuseni ngo izingalo Morpheus (unkulunkulu ubuthongo) kuyadingeka ukuba aqede zonke izimo ukuthi ukuvimbela sokulala enempilo. Futhi ukuze athobe umphefumulo, ungakwazi iphendukele izindlela wazama Folk imithi, isenzo omnene okuyoba neqhaza futhi ngcono jikelele zomzimba, kodwa okwengeziwe ukuthi kamuva.
Cabanga ngalokhu ...
ukucasuka ngokweqile, ukucindezeleka nokucindezeleka, kakhulu ezithinta nobuthongo, ngokuvamile umphumela engokwemvelo ukusetshenziswa utshwala nogwayi. nomthelela omubi inqubo ubuthongo kanjalo nokungabikhona ngokusebenza ngendlela ejwayelekile ubuthongo. Ukubuza umbuzo bawe kanjani elele ngokushesha futhi ubuthongo, kufanele ibonise nokuthi yini ikhofi kakhulu udakwe usuku lonke futhi kusihlwa, futhi yayingekona ukuthi ngokweqile emini ukulala.
Kukangaki wena wakhuluma undesirability zemibuthano ebusuku phambi kwe-computer ne-TV? Mhlawumbe sekuyisikhathi banake lokho ngakho esetshenziswa awuboni la imiphumela emibi ngisho nendlela yabo yokuphila, okubangela eziphikelelayo ukuphazamiseka kokulala. Futhi ukuqwasha, esikhundleni salokho, uba isoni zekhwalithi encishisiwe zokuphila: buthakathaka amakhono engqondo (ukucobeka), encishisiwe isivinini bezibona (ukucobeka), kanye inkumbulo ukungakhuli.
Ukwanda umsebenzi nsuku zonke
Sebenza kanzima ukuze basuse imikhuba emibi (utshwala, ugwayi, eziningi ikhofi), ungavumeli ngokwakho ukulala emini (ngaphandle uma ukugula). Kuyadingeka ukuba accustom ngokwabo yokuthi kubalulekile ukuba ekamelweni kuphela ubuthongo futhi ngihlanganyele ubulili. Lokhu kuzosiza ukwakha lesifanele afanayo associative, ngamanye amagama, ukwakha umkhuba, ithonya elihle ikhono ngokushesha ukuzumeka.
Futhi, zama ukwandisa umsebenzi ngokomzimba phakathi nosuku. Cabanga ukuthi kungani abantu ukuzumeka masinyane? Ngenxa ekhathele futhi udinga ukuphumula ukuze lulama.
State kwengqondo nomzimba
3-4 amahora ngaphambi sokulala akufanele sihlanganyele emidlalweni asebenzayo, kanye eduze kwantambama. Njengoba i "appetizer", ungasebenzisa ukungcebeleka romantic okudliwa emoyeni opholile. Futhi ungakwazi ukuthatha okugeza eziphumulele nge amafutha abalulekile (chamomile, lavender, rose, lemon namafutha) umculo oyikhonzile ethule. Zonke lezi izinqubo neqhaza ukuphumula jikelele ngokomzimba, ukukhululeka ezingadingekile, imicabango ize kusihlwa. Futhi, ungavali yokudlela, lokhu ungayeki umzimba ukulungiselela ebangela ubuthongo okwesikhashana. In an icala ngokwedlulele kungenzeka ukuhlela isidlo ukukhanya ne-yogurt, izithelo noma okunye-non-nutritive futhi kulula esiswini okuthile.
Pholisa ndawo ilele, kuze kube phakade ukhohlwa ikhompyutha ne-TV ngaphambi kokulala, kuyoba lula ukuba ufunde indlela ukuzumeka masinyane. Amazinga ukhululekile kakhulu ukulala - 17-18 degrees.
Yiqiniso, kufanele sizame ukuba bazivikele umsindo ngaphandle ukunciphisa ukukhanya egumbini lokulala. By the way, amnyama ngesivinini ukukhiqizwa kwe-melatonin, kunomthelela ukuwa okusheshayo elele.
Esinye sezihloko ezihlanganisayo, nomthelela ongemuhle ukudalwa kwemizwelo nonomusa belungiselela ebusuku noma ngesikhathi Awakening emfushane kukhona, Isimanga siwukuthi, iwashi. Zakha simo esishubile futhi uvalo uma nokubala engqondo (ngokuvamile - ngokungazi) isikhathi esisele ukuze baphumule. Ngakho thina esho yokwehluleka kwakhe nje, sokugxila ukunakwa zabo phezu kwalo. Umphumela - kuphela ukwelulwa "nomunyu" ekulweni ukuqwasha.
Indlela ukuzumeka masinyane? Amathiphu namacebo
Ufuna izindlela sendlela ufunde ukuzumeka masinyane, ungathola eziningi zokupheka ezithakazelisayo ngempela futhi uthathe amanye ofanele kakhulu ngamunye. Ukusebenzisa kwabo kanyekanye noma enye kusiza umuntu ukuba akhohlwe izinkinga ubudala.
Zama ukufunda ngaphambi kokulala noma iyiphi emaciniso (hhayi Thriller), noma ngisho kangcono - boring izincwadi noma iziqondiso. Lena indlela sasivumela ngempumelelo lapho nezinkophe sengathi egcwele phambili, nemicabango ofayo uzosuka endaweni ahlala kuyo yabo. Eqinisweni, abantu abaningi belulekwa ukuba balale kuya izincwadi opholile umsindo. Le ndlela kulula kakhulu ukusebenzisa, uma kunezingane ezincane, iphupho kumelwe futhi zingalawulwa. Kulokhu, endlebeni eyodwa, ufaka earphone kanti eyesibili uzokwazi ukubamba wengane ukukhala.
Ukuze ufunde indlela ukuzumeka masinyane, kungenzeka ukuzwa kusuka amasevisi ekhethekile, ngokusebenza okuyikho nesithakazelo ekugcineni okungcono ukuma ngokomzimba. Ukuze wenze lokhu, amanga emhlane wakho ngamehlo akho ivaliwe futhi imisipha. Ngakho zamehlo ngaphansi zamabhodlela avaliwe kufanele iqondiswe phezulu. Ngokusho ososayensi, lena isikhundla zemvelo kakhulu ngesikhathi sokulala. Kuwufanele umkhuba kancane, futhi kungenzeka ukuba sifinyelele ubuthongo cishe osheshayo.
Abantu abaningi bayalwazi nokulala, uziphathe ngendlela ngokuzenzakalela ukuqeqeshwa. pronunciation kwengqondo yamazwi ingxenye ethile yomzimba iba usinde ukufudumala (kusukela phezulu kuya phansi), kukhona ezingeni ngokomzimba, ngaleyo ndlela nokufeza yalokho efanele.
Sekuyisikhathi eside abantu abavamile laziwa kanjani ukufunda ukuzumeka masinyane, ngakho izindlela yendabuko umzabalazo wokulwa kuwukubonakaliswa ukuqwasha futhi manje ethandwa kakhulu. Ngokuhlakanipha elula izindlela - amanzi afudumele uju imizuzu 30 ngaphambi sokulala. Ithisipuni elilodwa uju ziyoncibilika e mayelana 0.5 inkomishi yamanzi afudumele. Amazinga ketshezi kufanele kube degrees bengekho ngaphezu kwama-60 ukubhubhisa izinto eziwusizo eziphila abakhuthele eziqukethwe uju.
Oduduzayo zezinkambi engamakhambi efiselekayo ukuba bayiphuze ngenxa 1-2 amahora ngaphambi sokulala ngemithamo ongatheni, ukuze singathwesi phezu liquid. Kuyadingeka ukushintsha indlela yokwakheka herbal, ukuze umzimba akusho ziyazijwayela. Kuwufanele ukulawula komzimba kanye contraindications ezihlukahlukene hhayi ukulimaza umzimba.
I zinambitheke kakhulu kubhekwa njengento lemon namafutha, Mint, oregano futhi willow-imbiza. Enelungelo izakhiwo sine kufanele motherwort, valerian, Yarrow kanye hop Izigaxa. Uma sihlanganise amakhambi ne itiye zakudala, akufanele bayakhohlwa lokuhlushwa ubuncane yalesi siphuzo itiye.
Ukukhethwa yezindlela afaneleka kakhulu ulwe ukuqwasha uhlale indoda. Futhi ungalilahli ithemba uma umphumela osheshayo akuyona izuzwe. Bheka, ukushintsha, sihlanganise futhi useshe futhi. Abantu abaningi bayakwazi ngokuphelele ukuqeda izinkinga nge ngilale, futhi lokhu kwakuqinisa kubo kancane bajabule kakhudlwana.